I-Big Wave yokufihla uDave - I-Airbnb
I-Big Wave yokufihla uDave
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguHeidi
Le ndawo isembindini we studio yimizuzu nje embalwa yokuqhuba kuzo zonke iindawo ezinomtsalane zaseGalveston. Indlu ihlaziywe ngomgangatho omtsha, ipeyinti, ifanitshala, i-AC ebandayo, njl njl. Ibekwe emva kwendlu enkulu kwisakhiwo esahlukileyo esinomnyango wabucala kunye nendawo yokupaka ukuze isetyenziswe ziindwendwe. Iindwendwe ziya kuba nokufikelela emva kwendlu yendlu enkulu. Nceda kungabikho maqela okanye ukuziphatha okungxolayo ngenxa yokucingela abamelwane. Iivenkile ezininzi eziluncedo kumgama wokuhamba.
Le yindlu yestudiyo epholileyo ene-vintage drainboard kitchen sink, ifriji encinci, i-microwave, kunye nomenzi wekofu we-keurig. Iisilingi eziphakamileyo kunye nezibane ezintle zinika imvakalelo ephangaleleyo. Ibhedi iyindlovukazi ubukhulu kunye ne-Dreamfoam umatrasi obonelela ngenqanaba lokuthuthuzela eliphakathi. Lo matrasi ufumana iinkwenkwezi ezi-5 kubanini! Kutshanje songeze ifreyim yebhedi elungelelanisiweyo elungele ukuhlala kwaye ufunde okanye ubukele umabonakude ebhedini. Sisebenzisa iilinen ezikumgangatho ophezulu kunye neepilo ezithambileyo, ezithambileyo. Kukho i-smart TV eqhagamshelwe kwi-WiFI (akukho ntambo) yokusasaza usetyenziso oluthandayo. Igumbi lokuhlambela elidityanisiweyo linendawo yokuhamba ngeshawa, isinki yepedastal, indlu yangasese, kunye newodrophu yokugcina impahla. Indlu ineyunithi enkulu ye-AC enokuthi isetelwe ngokuthanda kwakho. Le propathi inomgangatho we-vinyl ngeplanga enobubele besilwanyana sasekhaya kwaye ifanelekile kwiinyawo ezinesanti ezimanzi. Umrhumo wesilwanyana uvavanywa ekuphumeni.
I-TV ene-I-Netflix, I-Amazon Prime Video
4.88 · Izimvo eziyi-215
Le ndlu ikwindawo esekwe kusapho enamakhaya amaninzi anomtsalane akhiwe ekuqaleni kweminyaka yoo-1900. Iqula lesixeko lizibhloko ezimbalwa ukusuka apho. Unxweme luyi-1/2 yeemayile kuphela. Kukho iivenkile ezininzi eziluncedo ezibekwe kufutshane ukuba ulibale into evenkileni. Iimayile zayo ezi-3 ukuya kwiSithili sezeMbali saseStrand kunye neekhilomitha ezi-4 ukuya eMoody Gardens naseSchlitterbahn.
Izimvo eziyi-1 848
Ndihlala kwimizuzu embalwa kude kwaye ndinokufikelela nanini na ngefowuni.
Inombolo yomthetho: GVR-06129
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Galveston